China PVC rindrina ivelany Siding J Strip Manufacturing sy Factory |Marlene
PVC rindrina ivelany Siding J Strip
PVC Exterior Wall Siding Closing strip dia ampiasaina hanamboarana ny sisin'ny birao mihantona farany amin'ny tampony, matetika eo ambanin'ny eaves sy eo ambanin'ny saron'ny varavarankely.
PVC Exterior Wall Siding J Strip dia ampiasaina ho fitaovana fanakatonana sisiny ho an'ny zana-kazo mihantona, matetika ampiasaina manodidina ny varavarana sy varavarankely, manodidina ny gables herringbone ary ny sisiny manakatona ny sisin'ny hazo mihantona.
vokatra PVC J Strip
Size 4000mm * 55mm
loko Fotsy, mavo, volondavenona....natao.
Fampiharana Haingo rindrina ivelany
Famaritana nySiding rindrina ivelany PVCBirao mihantona
PVC rindrina ivelany mihantona birao dia karazana plastika profil amin'ny pvc toy ny tena vatana, ampiasaina amin'ny rindrina ivelany ny trano;mitana ny andraikitry ny saron-tava, fiarovana ary haingon-trano.
Ny tombony amin'ny rindrina ivelany PVC Siding J Strip
1. Henjana tsara, fanoherana ny fantsika ary fanoherana ny fiantraikany ivelany.Izy io dia azo tapahina amin'ny fomba tsy ara-dalàna araka ny fepetra takian'ny injeniera sy ny dingana, miondrika sy manova endrika, tsy ho mora vaky, tsy mora vaky, ary mahatohitra ny harafesina asidra sy ny etona rano, ny conductivity mafana ambany, ny lelafo mamono tena. Ny fenitra ambaratonga B1, dia afaka manemotra ny fiparitahan'ny afo.
2. Ny fanoherana ny fahanterana dia fananana voajanahary amin'ny PVC.Izy io dia ampiana amin'ny stabilizer anti-ultraviolet mba hahazoana vokatra manohitra ny fahanterana.Ankoatra izany, manana fanoherana ny toetr'andro mahery izy io.Tsy mora vaky amin'ny -40oC hatramin'ny 70oC, ary mbola tsara ny lokony.
3. fiainana fanompoana: Ny fiainana fanompoana dia hatramin'ny 30 taona.Ny vokatra dia tsy misy loto ary azo ampiasaina indray.Izy io dia fitaovana haingon-trano tsara indrindra amin'ny tontolo iainana.
4. Fahombiazana tsara amin'ny afo: Ny vokatra dia manana mari-pamantarana oksizenina amin'ny 40, tsy misy lelafo ary mamono tena lavitra ny afo.
5. Fametrahana haingana: Ny birao mihantona dia mora apetraka noho ny lanjany maivana sy ny fanorenana haingana.Ny fahasimbana amin'ny ampahany, dia mila manolo ny birao vaovao mihantona, tsotra sy haingana.
6. Fiarovana ny angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana: Ny sosona polystyrene insulation dia azo apetraka eo amin'ny sosona anatiny amin'ny solaitrabe mihantona amin'ny fomba tsara, ka tsara kokoa ny fiantraikan'ny insulation rindrina ivelany.Ny trano dia mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra, izay tena mitsitsy angovo.Ity vokatra ity dia azo ovaina sy ampiasaina indray ao anatin'ny 50 taona ary manana fahaiza-manao ara-tontolo iainana avo lenta.
7. Fikojakojana tsara: Ity vokatra ity dia mora apetraka sy madio, tantera-drano ary tsy misy hamandoana.
teo aloha: PVC rindrina ivelany Siding fanakatonana strip
Manaraka: PVC ivelany rindrina Siding fifandraisana bara
Trano rindrina ivelany
Fitaovana haingo rindrina ivelany
Pvc mihantona board
Pvc plastika profil
Fashion tokana tarehy solon-fefy PVC fencin ...
PVC double face plastika zaridaina fefy
PVC ivelany rindrina Siding fifandraisana bara
PVC rindrina ivelany Siding Eaves Plate
Haingo an-trano fomba maoderina plastika mitambatra tohatra...
Zaridaina haingon-trano plastika fefy trellis